Maitiro ekudzima emifananidzo muIOS 9 isina Jailbreak | IPhone nhau
Mifananidzo yeiyo iOS inoshanda sisitimu yakakosha yeaesthetics yayo. Vazhinji vashandisi vanofara navo, asi vamwe zvakadaro, vanotsamwiswa nenguva inoita kuti varasikirweSezvo ivo vachinonoka, zvirinani ivo vanotipa iwo iwo maonero kana isu tiri kukurumidza kuita chiito.
Mune shanduro dzakapfuura dzeIOS mifananidzo inogona kudimburwa nekuchinjira kune chekupera kwechiedza pese patinovhura kana kuvhara application, asi senge mifananidzo, kukura kwayo kunononoka uye kunoramba kuchipedza yakakosha nguva.
Imwe mhinduro ndeye kushandisa Jailbreak kuvakurudzira asi havasi vese vanoda kuzviita, asi isu tichaenda kukudzidzisa iwe hunyengeri hunotibvumidza kudzima mifananidzo yese pasina kushandisa Jailbreak. Iyi hunyengeri yakaburitswa paReddit uye inokutendera iwe kubvisa ese maficha pakati pekushandisa.
Dzima mifananidzo muIOS 9 isina Jailbreak
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kuenda kuZvirongwa> Zvakajairika> Kuwanika> AssistiveTouch uye tinoishandisa.
Bhatani reTouchive rinowanikwa pazasi kurudyi kwechidzitiro.
Iye zvino tinotsvedza chidzitiro ku kumbira Kutaridzika. Kana tangovhura, tichaona mabhatani eIthi AssistiveTouch anofamba pamusoro pekhibhodi.
Wobva wadzvanya pane chero chikamu cheiyo skrini kuti udzokere kune iyo huru skrini. Unofanira dzokorora maitiro aya kakawanda kudzamara tazoona kuti mifananidzo haicharatidzikeIyo inongochinja iyo skrini isina chero animation.
Kana iwo maratidziro anga amiswa, isu tichaenderera kune dzinga rakapotsa bhatani Kubatsira Kubata Kutanga.
Iphone icharamba ichienderera pasina kuratidza chero mhando yeanopopota kusvikira isu tazotanga. Kana isu tikamanikidzwa kuti tidaro, iwo maficha anozoonekwazve uye isu tichafanirwa kuita kuburikidza neiyi nzira zvakare kana tichida kudzima iwo maficha.
Ndakaedza hunyengeri ne iPhone 6 ine iOS 9.2 uye nePad Air Air ine iOS 2 Beta 9.3 uye mune ese ari maviri mamiriro mifananidzo yakaremara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima iOS 9 mifananidzo isina jailbreak
Jorge de la Hoz akadaro
Zvakanaka, hazvo zvinoita sekunge sehunyengeri kana sarudzo asi bhagi nechikonzero kuti mifananidzo yacho yamira kushanda uye ini handina kunzwisisa kuti nei uye zvakandinetsa uye ndaifanira kutangidza iyo iPhone, ndinofunga idhodhi ini ndiri paIOS. 9.2.1 iPhone 5 maererano
Pindura Jorge de la Hoz
Alexander Bernet akadaro
Ndatenda kwazvo nehunyengeri! Zvinosekesa, pane ipad zvinongorega uchizviita kana uchizviita muzasi kuruboshwe ... Ndinovimba inochengetedza bhatiri ...
Pindura kuna Alejandro Bernet
Ini ndinobvumirana naJorge, iri BUG, ​​kubvira paunozviita, maawa ekushandisa uye zororo anonyangarika kune anoshamisa (- Stripe) uye izvo zvinoitika kana chimwe chinhu chakaipa chaitika kune Inoshanda Sisitimu ... ..
saka hongu, zvakanaka kwazvo kuziva kuti zvinokwanisika "kumisa" mifananidzo, asi ...
Hazvingave zvakafanana here kuita "kuderedza kufamba"?
Icho chibhakera sekorona yemuti wemupaini uye wanga uchingoitika kwenguva yakareba, handizive kana vasina kucherechedza kana kuti handinzwisise kuti havazvigadzire sei.
Ndanga ndichipedza nguva ndiri pa iPhone 6 Plus uye hazvina basa kuti uite tsika iyi sezvo ichigona kuitika chero nguva.
Ehe, ini ndinoshandisa yekubatsira kubata, handizive kana chichava chimwe chezviitiko chinokonzera icho.
Zvinotsamwisa nekuti kufamba kunosara kuri kukurumidza asi zvinoratidza kuti kashoma.
Yakamira kundishandira kana uchivandudza kusvika 9.3.2, mumwe munhu anogona kuisimbisa? Ndatenda!